UYobhi Ugcina Ingqibelelo | Isigidimi SeBhayibhile
UMdali Unika Abantu IParadesi
Abantu Baphulukana Nomhlaba OyiParadesi
UYobhi Ugcina Ingqibelelo
UThixo Uhlangula Oonyana BakaSirayeli
USolomon Ulawula Ngobulumko
Iingoma Eziphefumlelweyo Ezithuthuzelayo Nezifundisayo
UYesu Ufundisa NgoBukumkani BukaThixo
UYesu Wenza Imimangaliso
Iziprofeto ZikaYesu Ezichaphazela Ihlabathi Lonke
UYesu Kristu Uyabulawa
Umhlaba Uba YiParadesi Kwakhona
Intetho Yezandla yaseNicaragua
USathana uthandabuza ingqibelelo kaYobhi kuThixo, kodwa uYobhi uhlala ethembekile kuYehova
NGABA ukho umntu onokuhlala ethembekile kuThixo xa evavanywa naxa kubonakala ngathi ukuthobela kwakhe akumziseli zinto eziphathekayo? Loo mbuzo waphakanyiswa—waza waphendulwa—ngendoda uYobhi.
Ngoxa amaSirayeli ayeseseYiputa, uYobhi isizalwana sika-Abraham wayehlala kwindawo ngoku ebizwa ngokuba yiArabia. Kanye ngelo xesha, iingelosi emazulwini zahlanganisana phambi koThixo, yaye nomvukeli uSathana wayelapho. Kuloo ntlanganiso yasezulwini, uYehova wachaza indlela amthembe ngayo umkhonzi wakhe onyanisekileyo uYobhi. Wathi akakho omnye umntu onengqibelelo efana nekaYobhi. Kodwa uSathana wema ngelithi uYobhi ukhonza uThixo kuphela ngenxa yokuba emsikelela yaye emkhusela. Wathi ukuba uYobhi wayenokuhluthwa konke anako, wayeya kumqalekisa uThixo.
UThixo wamvumela uSathana ukuba abuhluthe ubutyebi bukaYobhi, abulale abantwana bakhe, aze emva koko ayenze buthathaka impilo yakhe. Engazi ukuba konke oku kubangelwa nguSathana, uYobhi wayengasiqondi isizathu sokuba uThixo avumele zonke ezo zilingo. Sekunjalo, uYobhi akazange amqalekise uThixo.
Kwafika abahlobo abathathu bobuxoki. Kumlembelele owawuthethwa ngala madoda ogcwalise amaphepha encwadi kaYobhi, exoka athi uYobhi wohlwaywa nguThixo ngenxa yezono zakhe ezifihlakeleyo. Athi uThixo akakholiswa ngabakhonzi bakhe yaye akabathembi. UYobhi akazange avume ukukhohliswa ngawo. Eqinisekile wathi uya kuyigcina ingqibelelo yakhe de afe!
Noko ke impazamo eyenziwa nguYobhi kukuzithethelela ngokugqithiseleyo. Umfana ogama linguElihu owayephulaphule wonke loo mlembelele, wangenelela. UElihu wamluleka uYobhi ngenxa yokuba engaqondi ukuba ukuthethelelwa kolongamo lukaYehova uThixo kubaluleke ngakumbi kunokuthethelelwa komntu. Wabakhalimela nabahlobo bakaYobhi bobuxoki.
Emva koko uYehova uThixo wathetha noYobhi elungisa indlela acinga ngayo. Esalatha imimangaliso yendalo, uYehova wafundisa uYobhi ukuba umntu mncinane gqitha xa ethelekiswa noThixo. Ngokuthobeka uYobhi wasamkela isiluleko sikaThixo. Ekubeni uYehova ‘enomsa omkhulu nenceba,’ wamphilisa uYobhi, wabuyisela ubutyebi bakhe ngokuphindwe kabini, waza wamsikelela ngabantwana abalishumi. (Yakobi 5:11) Ngokugcina ingqibelelo yakhe kuYehova ngoxa wayelingwa ngokuqatha, uYobhi wangqina uSathana elixoki kwibango lakhe lokuba abantu abayi kuhlala bethembekile kuThixo xa bevavanywa.
—Oku kusekelwe kwincwadi kaYobhi.
Luluphi ucelomngeni olwaphakanyiswa nguSathana ngokuphathelele uYobhi?
Wafeza ntoni uYobhi ngokugcina ingqibelelo yakhe kuYehova?
Xa uSathana wayesithi uYobhi—eyona ndoda ingenakusoleka neyayisoyika uThixo ngelo xesha emhlabeni—ukhonza uYehova uThixo kuphela kuba efuna ukuzuza okuthile, wayebhekisela kuzo zonke izidalwa ezikrelekrele. Ngaloo ndlela uSathana wayethandabuza ingqibelelo yabantu kuYehova. Le mbambano yinxalenye yeyona mbambano inkulu eyaphakanyiswa nguSathana e-Eden, ethandabuza ukulunga nokufaneleka kolongamo lukaYehova. Incwadi kaYobhi ibonisa ukuba izidalwa zikaThixo zinokufak’ isandla ekuthethelelweni kolongamo lukaYehova ngokugcina ingqibelelo yazo.
“Ngaba Kukho Okungekho Sikweni KuThixo?”
ukuba uThixo ukuthiyile okungekho sikweni, kutheni ihlabathi lizaliswe kokungekho sikweni?